Fitsidihana ny Faritra Amoron'i Mania sy ny Faritra Menabe | Primature
Fitsidihana ny Faritra Amoron’i Mania sy ny Faritra Menabe
Lapan’i Mahazoarivo, ny 23 oktobra 2021 – Ho fanamafisana ny famerenena ny fandriampahalemana eto amin’ny firenena, izay laharam-pahamehana ao anatin’ny politika ankapoben’ny fanjakana Malagasy, dia nitarika ny governemanta nanatanteraka fivoriana arak’asa niarahana tamin’ireo tompon’andraikitra rehetra voakasik’izany tany amin’ny Faritra Amoron’i Mania sy ny Faritra Menabe ny Praiminisitra Ntsay Christian androany, ka tao Ambatofinandrahana, Mahabo, ary Miandrivazo no natao ny fihaonana.
Nikabary tamin’ny vahoakan’ny kaominina Mangataboahangy, distrikan’Ambatofinandrahana, ny Praiminisitra ka notsiahiviny fa ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, amin’ny maha-raiamandrenin’ny Malagasy rehetra azy, no naniraka ny delegasiona hidina ifotony toy izao, ary ny Lehiben’ny governemanta no mitarika ny rafitra mametraka ny filaminana anatiny eto amin’ny tany sy ny fanjakàna. Voaray avokoa, hoy izy, ny vaovao sy ny tatitra momban’ny tsy fandriampahalemana.
Ny « fifankatiavana sy ny fihavanana », amin’ny maha-soatoavin’ny tanindrazana azy ireo, no nentin’ny Praiminisitra nanentana ny vahoaka sy ny tompon’andraikitra rehetra isan-tsokajiny tao an-toerana, hanaja ny lalàna velona sy hifanome tanana amin’ny fitondram-panjakàna, mba hitsaharan’ny tsy fahamarinana, ny asan-dahalo, ny kolikoly, ny toetra ratsy sy ny fitiavan-tena izay mamono ny vahoaka Malagasy, satria fa tsy azo ekena intsony ireo voalaza ireo, ka hisy fepetra hentitra horaisina ho an’izay mbola minia manao izany.
Mikasika ireo fangatahana maro samihafa dia nampahafantarin’ny Praiminisitra fa hojerena akaiky ny hanatsaràna ao anatin’ny fotoana fohy ireo lalana rehetra ifamezivezena sy amoahana ny vokatra ao amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana.
Nitodika manokana tamin’ny Filohan’ny Antenimierampirenena izay nanatrika ny fihaonana tany an-toerana ny Praiminisitra nandritra ny fanazavàna nentiny, ary nambarany fa mba hanatrarana ny tanjona amin’ny fametrahana fandriampahalemana maharitra dia hampitomboina ny isan’ireo tompon’andraiki-panjakàna eo amin’ity sehatra ity, indrindra ireo zandary sy polisim-pirenena, ka hiasa avy hatrany ny toby miaramila vaovao ao Ambatofinandrahana.
Araka izany dia notsindrian’ny Praiminisitra manokana fa tokony hijoro amin’ny fahamendrehana ny mpitandro ny filaminana, mba halain’ny rehetra tahaka. Voakasik’izany koa, hoy izy, ny eo anivon’ny Fitsarana sy ny Lafin-tany, ary ny « délégué »m-panjakàna sy ireo mpiasam-panjakàna miandraikitra ny fanaraha-maso ny omby.
Misy lafiny hafa nitondràn’ny Praiminisitra fanazavàna ihany koa nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony, dia ny momban’ny hanatsaràna ny fotodrafitrasa misy mba hivelaran’ireo tanora, sy ireo fotodrafitrasa mifandraika amin’ny tobim-pahasalamàna, ny toha-drano hampiroboroboana ny fambolena, ary indrindra ny mahakasika ny rano fisotro madio.
Manoloana ny tranga tsy fandriampahalemana niseho tao Mahabo tamin’ny 9 oktobra lasa teo dia nambaran’ny Praiminisitra nandritra ny fivoriana arak’asa natao fa efa najoron’ny fitondram-panjakàna ny rafitra isam-paritra misahana ny filaminana, ka takiana amin’ireo tompon’andraikitra ny vokatra eo amin’ny asa fanadihadiana sy ny fampandriana fahalemana.
Tsy andraikitry ny mpitandro ny filaminana ihany anefa izany, hoy ny Praiminisitra, fa manana adidy ireo rehetra nomena andraikitra eto amin’ny firenena, hanatanteraka ny tandrify azy ao anatin’ny fahamarinana, ary hifanome tanana.
Tao Mahabo ihany koa no nanomezany toky fa izay endrika fampandrosoana neken’ny fitondram-panjakàna eo ambany fitarihan’ny Filohan’ny Repoblika (fotodrafitrasa, fampitaovana ny mpitandro ny filaminana, lalana madinika, tsena manara-penitra, kianja, sns) dia tsy maintsy hotanteraka avokoa, saingy ny antanan-tohatra ikarakaràn’ny Faritra tsirairay avy ny taratasim-panjakàna mifandraika amin’izany no samy manana ny azy, ka tsy tokony hisy ny ahiahy amin’ny mety tsy ho fahavitàny. Na izany aza, hoy ihany ny Praimininisitra, araka ny efa hita tamina Faritra hafa, dia tokony hiarahan’ireo olom-boafidy sy olom-boatendry midinika ny fandraisana fanapahan-kevitra momban’ny fanatanterahana ny fampandrosoana ny Faritra. Nohamafisiny ny lalan-tsaina « tolérance zéro » hatrany am-piandohana, izay mbola mihatra hatramin’izao fotoana izao.
Noraisin’ny Praiminisitra nandritra ny fivoriana arak’asa notanterahina tao Miandrivazo avokoa ny toromarika mahakasika ny fampandriana fahalemana nomena ny tompon’andraikitra tamin’ireo distrika roa notsidihina teo aloha.
Hojerena indray mandeha, hoy izy, ny resaka fandriampahalemana eny amin’ny lalam-pirenena, ary isan’izany ny faha-34 izay mandalo eo Miandrivazo. Hapetraka araka izany ny « Aire de repos » mba hahafahana mametraka « Brigade de Sécurité Routière » eo amin’izany toerana izany, hahafahan’ny zandary manao fanaraha-maso. Notsiahivin’ny Praiminisitra fa efa nametrahana « Base Opérationnelle Avancée » ao Morafenobe, izay iandraiketan’ny miaramila, hiarovana ny distrika rehetra manodidina, na ao amin’ny Faritra Melaky izany, na ao amin’ny Faritra Menabe, eny hatramin’ny ao amin’ny Faritra Bongolava. Nambarany fa antony ahafahana mandray izany fepetra izany ny fanapahan-kevitra noraisina nanitsiana ireo rafitra teo anivon’ny Tafika Malagasy, ny Zandarimariam-pirenena, ary teo anivon’ny Polisim-pirenena amin’izao fotoana izao.
Efa mizotra ihany koa, hoy ny Praiminisitra, ny fananganana fotodrafitrasa ho an’ny « Bureau d’Administration Minière », hanatsaràna ny fanaraha-maso ny fitrandrahana sy ny fivezivezen’ny harena an-kibon’ny tany, ohatra amin’izany ny famoahana taratasy fahazoan-dalana (laisser-passer) hitondra ny vokatra notrandrahina, hamonjy ny renivohitra ; ohatra faharoa, ny fandrindràna ny resaka haba izay misy ampahany miverina amin’ny toerana nitrandrahana.
Nomarihin’ny Praiminisitra manokana ny maha-zava-dehibe ny fananan’i Miandrivazo « Tribunal de Première Instance », izay azo lazaina fa manamora ny fandraharahàna ny asam-panjakàna eo anivon’ny Fitsaràna.
Nanolotra fisaorana ho an’ny vahoaka sy ny tompon’andraikitra rehetra tamin’ireo toerana telo notsidihina ireo ny Praiminisitra, ary nanentana ny tsirairay hiasa ao anatin’ny fahamarinana hatrany sy ho an’ny tombontsoa iombonana.
← Conseil du gouvernement du Mercredi 20 Octobre 2021
Famerenana ny fandriampahalemana →
Fahamaizana tao amin’ny kaominina Fasintsara